Kenza yakakunda kurwisa Carlos Ruiz Zafón, asi basa rake rinoramba riripo | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Noticias, dzakawanda
Nyika yekuSpanish yekunyora yakasimuka mukuchema nhasi, Chishanu, Chikumi 19, 2020, mushure mekuziviswa kweshoko rerufu rwakaipa rweCarlos Ruiz Zafón. Munyori we bestseller Mumvuri wemhepo Akafa pazera diki makumi mashanu nemashanu, akabatwa nekenza. Ruzivo rwepamutemo rwakaburitswa nePureta imba yekutsikisa.
Parizvino, munyori aigara muLos Angeles. Ikoko, akazvipira kuzvido zvake, akazvipira zvizere kuHollywood indasitiri. Nhau idzi dzakaparadza Spain, nyika yaakaberekerwa, mune imwe yenguva dzakaomesesa iyo nyika yeCervantes yakararama kuburikidza neCovid-19.
1 Carlos Ruiz Zafón, pakati pevanyori vakakurumbira vemazuva ano
1.1 Kusvika, Muchinda weMist (1993)
1.2 Kutsvenesa Kwekutanga, Iyo Shadow yeMhepo (2001)
1.3 Mumvuri wemhepo uye yakadzika tsoka muGerman
1.4 Iyo tetralogy, kuvharwa kwayo nekukura
2 Hukuru hwaenda, uye basa hombe rinosara mumvuri waro mumhepo
Carlos Ruiz Zafón, pakati pevanyori vakakurumbira vemazuva ano
Kusvika, Muchinda weMist (1993)
Zafón akawana chinzvimbo chinokudzwa pasirese yekunyora pasi pasina nguva. Mushure mekuburitswa kwe Muchinda weMist, muna 1993, vatsoropodzi vakafanotaura basa rakanaka, uye ndizvo zvazvaive. Kunyangwe iri rake rekutanga basa, iri rakagamuchirwa kwazvo, rombo risingabate munhu wese. Muchokwadi, iri bhuku rakamupa iye mubairo weEdebé muchikamu cheVechidiki Mabhuku. Ivo vakatevera iyo posvo. Imba yehusiku pakati pehusiku uye mwenje waGunyana, uye neyekupedzisira akavhara chaive chekutanga trilogy yake yekutanga.
Kutsvenesa kwekutanga, Mumvuri wemhepo (2001)
Nekudaro, uye kutsvaga zvimwe - hunhu hwaimuratidzira muhupenyu hwake hwese-, muna 2001 akasvetukira kunhandare yepasi rose nebasa rake. Mumvuri wemhepo. Iwo ma accolades akakurumidza uye akaverengwa nezviuru. María Lucía Hernández, pamusuwo we Rudzi, akataura:
"Inobata kusagadzikana uye iyo 'kushamisika chinhu' nenzira yakasarudzika, isingaregi kuvimbika, nekuti zvine chekuita nekusanganisa tsika dzeSpanish nezviitiko zvenguva yepiri mushure mehondo."
Gonzalo Navajas, wezve chikamu chake, akati:
"Mumvuri wemhepo Yakanga yave, nekuda kwekugamuchirwa kwayo kwepasi rose, Hypertext umo […] Tsika dzechiSpanish dzemazuva ano dzakaratidzirwa uye dzikawana musimboti mumamiriro epasi rose ".
Mumvuri wemhepo uye kwakadzika kwayo kuGerman
Uye hongu, iro bhuku raive rakabudirira zvachose, kwete chete mukutengesa, asiwo mukukonana kwaro kwetsika. MuGerman, semuenzaniso, basa rakasvika pakati pa2003. Mumakore asingasviki maviri nehafu pakanga patove nemakopi anodarika miriyoni akatengeswa. Kubudirira kwakakura kwemabhuku echiSpanish, kunyanya tichifunga nezvenguva yazvakaitika. Tiri kutaura nezve chiuru chemakopi pazuva panguva iyoyo, chinhu icho, tichifunga kuti munyori anga asingazivikanwe panguva iyoyo, chinoonekwa sechiyemurika.
Kune rimwe divi, kukanganisa kune veruzhinji veGerman kuverenga kwaive kwakakurawo. Chinyorwa ichi chaionekwa se "chinonakidza" pamapeji eiyo Neue Züricher Zeitungse, panguva imwechete iyo yaionekwa se "iri nyore" dingindira. Chokwadi ndechekuti Tsoka yaZafon yakaramba iriko, uye zvaigona kuonekwa munyika idzodzo.
Quote naCarlos Ruiz Zafón.
Iyo tetralogy, kuvharwa kwayo nekukura
Chinhu chimwe chakadzivirirwa kune chimwe uye mushure memakore gumi nemashanu — nekumbomira kwenguva refu kuti unakidzwe nemisangano yekubudirira kwe Mumvuri wemhepo-, iwo mazita matatu aigona kupa chimiro chekupedzisira kunyaya akauya:
Mutambo wengirozi (2008).
Musungwa weKudenga (2011).
Labyrinth yemweya (2015).
Vanyori vanowanzo kuve vatsoropodzi vako vakaipisisa - Uye hazvisi kuti Zafón akapunyuka kubva ipapo, isu tiri kutaura nezvemunyori wemamilimita uye tichizvikumbira. Nekudaro, mushure mekuisa yekupedzisira poindi ku Iyo labyrinth yemweya, Carlos akataura kuti mutambo wacho waive "chaizvo zvawaifanira kunge uri." Chikamu chimwe nechimwe, ipapo, chakaenderana sezvachinofanira kuitwa, uye chakanyatsoiswa pachishandiswa zvishandiso zvemunyori akazvipira pabasa rake uye achiziva nezve rake rinokudzwa semumiriri wezvinyorwa zveSpain.
Hukuru hwaenda, uye basa hombe rinosara mumvuri waro mumhepo
Iko kuda kwevatengesi, kunoratidza: inofadza, inokwezva, inopenya isina kudzora, inojekesa zvese zvinobata. Hongu zviripo chirevo chekutsanangura nacho Carlos Ruiz Zafón maererano nebasa rake semunyori, iro ndere murume anofarira tsamba.
Akakurumidza kuenda, asi akashandisa mukana wega wega wechipiri kuti awane kusafa mune raakashanda. Izvi zvinoratidzwa neshanduro makumi mana, iwo anopfuura mamirioni gumi emabhuku akatengeswa, pamwe nekukanganisa kwawo kune dzimwe nyika. Hongu, akasiya ndege, asi haasati asvika uye haazadze dzimba dzekukanganwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Cancer yakakunda kurwisa Carlos Ruiz Zafón, asi mazwi ake acharamba achipenya